» संकटामा संकटा अम्ब्रेला ट्रीट, कसरी भयो रातारात भाइरल ? दैनिक १५ हजारको घुइँचो, हेर्नुहोस भिडियो.. संकटामा संकटा अम्ब्रेला ट्रीट, कसरी भयो रातारात भाइरल ? दैनिक १५ हजारको घुइँचो, हेर्नुहोस भिडियो.. – हाम्रो खबर
संकटामा संकटा अम्ब्रेला ट्रीट, कसरी भयो रातारात भाइरल ? दैनिक १५ हजारको घुइँचो, हेर्नुहोस भिडियो..
न्युरोड गेट कट्न नपाउँदै मान्छेहरूका अनेकन बान्कीले ध्यान खिच्छ। गेटबाट देब्रे मोडिएर संकटा मन्दिर जाने बाटोमा कोही हाँसिरहेका छन्, कोही नाचिरहेका। कोही गीत गाइरहेका त कोही विभिन्न पोज दिइरहेका।
कोरोनापछि लगभग सुनसान यो गल्लीमा अचेल ठेलामठेल गर्दै मान्छेको घुइँचो छिचोल्नुपर्छ। यो भिडको कारण हो यहाँ सजाइएका रंगीविरंगी छाता। दुई साताअघि स्थानीयवासी, संकटा क्लब र वडाको सहकार्यमा यो सडकको माथिमाथि रंगीविरंगी छाता झुन्ड्याइएको हो।
गल्लीको वास्तविक नाम टेबहाल भए पनि दुई सातामै यसले नयाँ नामहरू पाएको छ- ‘अम्ब्रेला स्ट्रिट, भाइरल रोड, टिकटक रोड।’
यहाँ घुम्न आउनेहरूले टिकटकमा भिडिओ राखेपछि सामाजिक सञ्जालबाट यो ठाउँ रातारात भाइरल बनेको छ।
टिकटकमा यो ठाउँ भाइरल भएको देखेरै काठमाडौं, चाबहिलकी सुस्मीता ढकाल सोमबार ‘अम्ब्रेला स्ट्रिट’सम्म अइपुगिन्। बहिनी रचना ढकालसँगै यहाँ आइपुगेकी उनले ‘फूलबुट्टे सारी’ लगायत गीतमा टिकटकसमेत बनाएको बताइन्।
टिकटकमा अरूले हालेको भिडिओमा यो रोड कस्तो राम्रो देखिएको थियो। नजिकै भएर पनि होला, छाता हेर्न मन लागिहाल्यो,’ सुस्मिताले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘केही टिकटक बनायौं, फोटो खिच्यौं। रमाइलो लाग्यो।’
अरू सबै राम्रो भए पनि अत्यधिक भिड उनीहरूलाई मन परेन। एक घन्टा घुमेर घर फर्किने मनसाय बनाएका उनीहरू दुवैले आफूलाई टिकटकमा फलो गर्न र भिडिओ लाइक गर्न अनुरोध गरे।
संकटा क्लब र स्थानीय व्यापारीहरूले व्यापारिक माहोल सिर्जना गर्न छाता राखी आकर्षण थपेका हुन्।
तर योजना अनुसार काम भएन। डेढ सय मिटर सडकमा छाता टाँगिएको एक साता मात्रै हुँदा यहाँ दैनिक १५ हजार घुम्न आउने गरेको एक फुटपाथ व्यापारीले बताए।
फुटपाथमा कपडा व्यापार गर्दै आएका उनले भने, ‘मानिसहरू आउनु राम्रै हो। मान्छे आउँछन्, चहलपहल बढ्छ, व्यापार बढ्छ भन्ने नै सोचेर छाता राखिएको थियो। तर यहाँको भिड देखेर नियमित ग्राहक पनि तर्किएर जान्छन्।’
छाताले सजिएको बाटो टिकटक प्रयोगकर्ता र आन्तरिक पर्यटकले खचाखच छ। सवारी चालक र बटुवाले बाटो नपाउने अवस्था छ। सडक निर्माणको कामसमेत राम्ररी गर्न नसकेको मजदुरी गर्दै आएका राजेन्द्र तामाङले गुनासो गरे।
‘चार दिन भयो सडकको छेउ बनाउन थालेको। गरे-नगरेको बराबर छ,’ तामाङले भने, ‘काम गर्दै जान्छु, कुल्चिँदै जान्छन्। कतिलाई गाली गर्नु? दोहोर्‍याएर काम गर्नु परेको छ।’
एकातिर सडकको काम रोकिएको छ, अर्कातिर जाम बढेको छ। मान्छे र साना सवारीको हुलमुलले यो मेलाजत्तिकै भएको छ। यहाँ फुर्सदले भिडिओ बनाउन र फोटो खिच्न पनि पाइँदैन। त्यसैले धेरैले टिकटक रमाइलो गरी लेख्छन् पनि- भिडिओ बनाउने वातावरणै छैन।
अस्वभाविक भिडभाड बढ्न थालेपछि संकटा क्लब आफ्नै निर्णयले संकटमा परेको छ भन्दा फरक पर्दैन। अत्यधिक भिड थाम्ने अवस्था नभएपछि छाता हटाउने वा केही समयका लागि बन्द गरिराख्ने सुझाव आएको संकटा क्लबका सचिव आशिषमान सिंहले जानकारी दिए।
हामीले सामान्य रूपमा मानिसहरूको आवतजावत बढोस् भनेर यस्तो उपाय लगाएका थियौं। तर अहिले हामीले पनि नसोचेको भयो,’ सचिव सिंहले भने, ‘दैनिक १५ हजार मानिस घुम्न आएको हाम्रो अनुमान छ। बिहानदेखि साँझसम्म नै उस्तै भिड हुन्छ।’
क्लबले स्थानीय व्यापारीको आर्थिक सहयोगमा छाता किन्न मात्रै ३ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। ज्याला यसमा जोडिएको छैन। जम्मा चार सय २० छाता सडकको माथि रंगिएका छन्। भित्री गल्लीमा व्यापार बढ्ने हिसाबले आकर्षण थप गर्न छाता राख्ने उपाय संकटा क्लबकै हो।
‘लकडाउनले भित्री सडकको व्यापार चौपट पारेको थियो। कसरी ग्राहक तान्ने, कुनै उपाय लागेन,’ सिंहले भने, ‘मैले नै यो उपाय लगाएको हुँ। सबैको सहमति भएपछि छाता राखियो।’
तर सबै आकर्षण र भिडले सोचेजस्तो नतिजा कहाँ दिन्छ र! यो सडकको सजावटले फाइदाभन्दा बढी झमेला बढाएको छ।
उनले अगाडि भने, ‘भिडअनुसार व्यापार नभए पनि हेर्दा पहिलेभन्दा राम्रो भएको व्यापारीहरूले बताइरहेका छन्। म आफैंलाई पनि महसुस भएको छ। तर नयाँ वर्षपछि पनि यस्तै भिड भइरह्यो भने त हामीले छाता हटाउने वा बन्द गर्ने पनि सोचिरहेका छौं।’
यसबारेमा स्थानीयहरूसँग पनि सल्लाह भइरहेको उनले बताए।